Kooxda Jwxo-shiil oo Dawliskii u Go,ay Ina Aw Xuseena Dooji Isleeyahay – Rasaasa News
Kooxda Jwxo-shiil oo Dawliskii u Go,ay Ina Aw Xuseena Dooji Isleeyahay
Jan 9, 2010 Jwxo-shiilada
Jwxo-shiil, oo Eritrea arxan mooday afkana ood ka saaray kooxdii uu madaxda u ahaa ee loo yaqaanay kooxda Jwxo-shiil, oo eegga midba meel taagan yahay.
Warar la hubo oo naga soo gaadhaya Kopenhagen, ayaa sheegaya in Abdullahi Mukhtar uu kulan aan caadi ahayn uu la galay dhawr ruux oo si gaar ah u taageersan JWXO-shiil. Kulankaasi ayaa la sheegayaa in uu ku lafagurayo khilaaf, xoogan oo dhexyaal guud ahaan kooxda Jwxo-shiil, Ashkhaastan uu la kulmay ayaa ahayn xubnaha kooxda, balse ah taageerayaal si gaar ah ugu xidhan Jwxo-shiil. Wararku waxay intaas ku darayaan in kulanka oo guriga Ina Aw Xuseen lagu qabty uusan imanin Cadaani Hirmooge, oo loogu yeedhay in uu kulanka yimaado.
Sidii uu Ina Dhuubo [Cadaani] uga soo laabtay Australia, wuxuu galay qol cidla ah isaga oo ay urugo badani ka muuqato, kana go,ay dhamaan xidhiidhkii uu la lahaa xubnaha kooxda. Jwxo-shiilada ayaa waxaa go,ay xidhiidhkii u dhaxeeyey intoodii isku hadhay, iyada oo ay awal hore uga tageen xubnaha intoodii badnayd, ayna ahaayeen kuwa isku hadhay kuwa quudaraynaya jagada Jwxo-shiil, taas oo ah wax aan dhici karin.
Khilaafkan soo kala dhexgalay JWXO-shiiladda intooda joogta Kopenhagen, ayaa loo badinayaa in uu intiisa badan ku wajahan yahay, qoraalkii uu Caddani isku dayay in uu u dhiibo, wafdigii ka socday Itoobiya, iyo waji xumadda uu kala kulmay.
In kasta oo ay kooxda Jwxo-shiiladu meel walba ku fashilmeen, haddana waxaa culayska intiisa badan la saarayaa in uu Jabka intiisa badan uu ku yimid macangagnimada ay qabyaaladu hadhaysay ee JWXO-shiil, dabci xumadda Ina Dhuubo iyo Qaaxo oo saaxadii halgankaba ka baxay, oo xidhiidh toos ah la yeeshay Cabdi Illey.
Dhex yaalada sida Maaday, Diirane, Abdullahi Mukhtar [Min yari], wax laggaga tashado iskaba daayee xataa meel lagu xisaabiyo ma leh. In kasta oo Maadey ay haysato dhibaato xoog leh burburayna hankiisii ahaa in Jwxo-shiil mar uun meesha uu u baneeyo, baxsadna kaga yimid Eritrea.
Jwxo-shiil, ayaa ka codsaday xubnaha kooxdiisa in ay isugu yimaadaan Caasmara bisha January 2010, si uu u canaanto qar ka mid ah uuna isaga dhigo nin wax xukuma, waxaana uu waayey wax jawaab ah oo ku soo laabata.
Jwxo-shiil, baa Jabhad noqon oo halgan wax ku soo biirinaaya, waa arin ugub ah oo la wada arkayey in ayna dhacaynin, waxaase tiiraanyo iyo tu aan laga soo waaqsan noqotay in halgankii Naf iyo maalba lagu waayey uu maanta marayo meeshii ay mareen kuwii ka horeeyey.
Kooxda Jwxo-shiil, oo ayaa haatan ruux waliba ruuxa kale ku eedaynayaa burburka aan wax ka qabadka lahayn ee ay iyagu sababeen.
Waxaase hubaal ah in ayna taariikhdu cafiyeynin xubnaha aan soo liistayndono, kuwaas oo aan sharaf iyo wanaag dambe u dhexyeelan doonin dadweynaha Somalida Ogadeeniya inta ay nool yiiin.
rasaas baa runta sheegee rafiiqaga ka yeelo
Warar Hordhac ah oo ka Soo Baxaya Budhcadii Dilka ka Gaysatay Minneapolis